Semalt: मेजर स्क्र्यापिंग सफ्टवेयर र उनीहरूका फाइदाहरू
स्क्रिन स्क्र्यापिंग भनेको इन्टरनेटबाट डाटा स collecting्कलन गर्ने र यसलाई पढ्ने र स्केलेबल फारममा रूपान्तरण गर्ने अभ्यास हो। कुनै पनि कम्पनी जुन वेबबाट डेटा स collect्कलन गर्न र प्रयोग गर्न आवश्यक पर्दछ यस प्राविधिकबाट फाइदा लिन सक्दछ। स्क्रिन स्क्र्यापिping सफ्टवेयरको प्रमुख फाइदाहरूमध्ये एउटा यो हो कि यसले सटीक र विश्वसनीय परिणामहरू प्रदान गर्दछ। स्क्रिन स्क्र्यापिंग उपकरणहरूले तपाईंलाई एक पटकमा बहु डाटा स्क्र्यापि tasks कार्यहरू गरेर तपाईंको कामको गति बढाउन अनुमति दिन्छ। तपाईले जानकारी सँगै एकत्रित गर्न सक्नुहुनेछ ताकि यो एकल स्थानमा विश्लेषण गर्न र खोजी गर्न सकिन्छ।
१.मजेन्डाको साथ तपाईंको समय र उर्जा बचत गर्नुहोस्।
इन्टरनेट एक विशाल जानकारी राजमार्ग हो। वेब भन्दा पहिले, जानकारी खोज्नु भनेको वरिपरि सोध्नु वा शारीरिक पुस्तक वा कागजात अनुसन्धान गर्नु हो। हालसालै, हामी केवल एक ब्राउजर खोल्न र वेब खोजी गर्न आवश्यक छ। स्क्रिन स्क्र्यापि or वा वेब स्क्र्यापिंग उपकरणको साथ तपाईं आफ्नो समय र पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ। थप, तपाईंले परिष्कृत प्रोग्रामिंग वा कोडिंग भाषाहरू सिक्नुपर्दैन। यी सेवाहरू दुबै प्रोग्रामर र गैर प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छन् र गुणस्तर परिणामहरू सुनिश्चित गर्दछन्। मोजेन्डा एक भरपर्दो र अद्भुत उपकरण हो। यो हजारौं वेब एजेन्टहरू निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ र सयौंदेखि हजारौं वेब पृष्ठहरूमा प्रक्रिया गर्न सकिन्छ। यसको शुद्धता र विश्वसनीयता मेल खाँदैन।
२. अक्टोपार्से, किमोनो ल्याबहरू र Import.io को साथ द्रुत र सटीक परिणामहरू:
Import.io, Kimono Labs, र Octoparse ले छिटो र पढ्न योग्य डाटाको प्रावधान सुनिश्चित गर्दछ। तपाईं आफूले चाहे जति धेरै वेब पृष्ठहरू स्क्र्याप गर्न सक्नुहुनेछ र एक पटकमा बहु स्क्र्यापि tasks कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ एक पटकमा वेब पृष्ठहरूको ठूलो संख्याबाट जानकारी निकाल्नको लागि राम्रो स्क्रिन स्क्र्यापिंग सफ्टवेयरको लागि अप्ट इन गर्न सक्नुहुन्छ। किमोनो ल्याब, अक्टोपार्से, र Import.io साना र मध्यम आकारको कम्पनीहरूको लागि उपयुक्त छन्।
P. पार्सेहबको साथ मूल्य विश्लेषण गर्नुहोस्:
ParseHub इन्टरनेट मा एक राम्रो डाटा स्क्र्यापिंग सफ्टवेयर हो। तपाईं यो स्क्रेपर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न साइटहरूको मूल्य निर्धारण जानकारी तुलना गर्न। त्यस्ता उपकरणहरू विभिन्न ई-कमर्स साइटहरू मार्फत नेभिगेट गर्दछन्, उत्पाद वर्णन र मूल्य निर्धारण जानकारी प्राप्त गर्दछन् र तपाईंको आवश्यकता अनुसार सामग्री स्क्र्याप गर्दछ। स्क्रिन स्क्र्यापिंग सफ्टवेयर स्टार्टअपहरू र ई-कमर्स वेबसाइटहरूको लागि उपयुक्त छ र तिनीहरूलाई विभिन्न उत्पादनहरू र सेवाहरूका मूल्यहरूको विश्लेषण गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं इन्टरनेटबाट पाठ र छविहरू सहित कुनै डाटा निकाल्न संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने, ParseHub तपाईंको लागि सही विकल्प हो।
U. तपाईको साइट क्रॉल गर्न UiPath प्रयोग गर्नुहोस्।
के तपाईं सजिलैसँग र राम्रो गतिमा तपाईंको वेब सामग्री क्रल गर्न चाहनुहुन्छ? UiPath इन्टरनेट मा एक सबै भन्दा राम्रो स्क्रीन स्क्र्यापि and र डाटा निकासी उपकरण हो। यस उपकरणले तपाईंको वेब पृष्ठहरूलाई सजिलैसँग अनुक्रमणिकामा मद्दत गर्दछ र तपाईंको साइटको खोजी ईन्जिन स्तर निर्धारणलाई एक हदसम्म सुधार गर्दछ। एक संकेत गरिएको UI तत्वबाट पाठ प्राप्त गर्नका साथै तपाई बहुविध प्रकारका विशेषताहरूको मान पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। यसले सटीक नतिजा प्रदान गर्दछ, तपाईंको साइटहरूको अनुक्रमणिकामा विभिन्न बोटहरू र माकुरोहरू प्रयोग गर्दछ र यसको प्रयोगकर्ता-मैत्री इंटरफेसका लागि परिचित छ। एकचोटि डाउनलोड र सक्रिय भएपछि, UiPath ले गुणवत्ता डेटाको प्रावधान सुनिश्चित गर्दछ र तपाईंको साइटलाई अनुकूलन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले हामीलाई सब भन्दा सहज र सुविधा युक्त स्वचालन विकास वातावरण प्रदान गर्दछ।